Xaalad cusub oo kusoo korortay dagaalka Boosaaso | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xaalad cusub oo kusoo korortay dagaalka Boosaaso
Xaalad cusub oo kusoo korortay dagaalka Boosaaso
Boosaaso (Dalkaan.com) – Wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso oo maalmihii u dambeeyay ay ka taagneyd xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada PSF iyo kuwa maamulka Puntland, ayaa sheegaya in la furay qaar kamid aaga-gii lagu dagaalay.
Ciidamadii isku horfadhiyay magaalada Boosaaso ayaa la kala qaaday, waxaana la furay qaar kamid ah aaga-gii maalmihii u dambeeyay lagu dagaalamayay, ayada oo meelaha qaar ee magaalada uu dib u furmay isku socodkii.
Dadweynaha qaarkood ayaa la arkayey ayaga oo tagaya xarunta PSF iyo goobihii lagu dagaalamayay oo isku socodkooda dib loo furay, waxayna u muuqata inay dib ka dhaqan gashay xabad-joojintii shalay lagu baaqay.
Wararka ayaa intaas kusii daray in Ciidamada labada dhinac ee ku dagaalsan Boosaaso uu mid walba dhankiisa uu baaritaan ku sameynayo gaadiidka dadweynahay, kadib markii ay dib u fureen isku socodka qeybo kamid ah magaalada.
Tallaabadan ayaa imaneysa xilli ay bulshada reer Boosaaso uu waagu ugu beryey sawaxanka rasaas dhaceysa iyo hubka culus, kadib markii xalay saqdii dhexe uu bilowday dagaal aad u culus oo u dhexeeyay ciidamadda Puntland iyo kuwa PSF ee daacadda u ah Jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano.
Dagaalkaas ayaa wuxuu si iskiis ah u istaagay 7-dii subaxnimo ee saaka. Xaalada ayaa illaa hadda degan.
Labada dhinac ee isku haya gudaha magaalada Boosaaso oo dhowr jeer eedeymo isku jeediyay, ayaa hadda u muuqda inay si isku mid ah u qaateen baaqii xabad-joojinta, kadib maalmo dagaal xoogan oo khasaaro badan geystay uu ku dhex-maray magaaladaas.
Shalay ayay ahayd markii Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan uu ku baaqay in xabbada la joojiyo, waxaana jiray Isimo iyo waxgard kale oo dhexda u xirtay inay joojiyaan dagaal danbe oo ka dhaca magaaladda, waxaana mar kale Puntland sheegtay in ay wadahadallada nabaddu sii socdaan.
Farmaajo diid ka dilaacay Hirshabeelle. Sababta loogu gacan qaaday Gudoomiye kuxigeenka...
Xogta Dagaalka Muqdisho, Rooble oo La Yimid Qorshe lagu soo afjarayo...
Farmaajo oo amray inaan la bixin karin lacagtii laga qabtay Imaaraadka...
Chelsea oo isha ku heysa Wesley Fofana inay ka dhigto bedelka...
Xogta Kulanka Midowga Musharaxiinta Ay La La qaateen Wafdigii Midowga Africa...
Deg Deg Sheekh Shariif oo ka digay Dib-u-dhac doorasho, Dadaalka...
Al-Shabaab oo shaacisay inay weerar ku dishay mas’uul ka tirsan Koonfur...